उफ! फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य - Mero Tribune
Home ON POINT उफ! फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य
उफ! फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य एक पछी अर्को गर्दै फेरि बढाएको छ । मूल्य बढाएको दुई साता पनि नबित्दै निगमले मंगलबार फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको हो ।
निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढाएर पेट्रोलको मूल्य १२९ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । डिजेल/मटितेलको मूल्य अब प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढेर ११२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढाएर ८४ रुपैयाँ, हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) को प्रतिकिलोलिटर १९ अमेरिकी डलर बढाएर ७४५ डलर पुर्‍याएको छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेर १४ सय २५ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
यसरी मूल्य बृद्धी गर्दा जनतालाई प्रतक्ष मार पर्ने देखिन्छ । अब त गाडी चड्न र खाना पकाउन पनि सार्है महङ्गो पर्ने भयो । सरकारले यसको उचित बिकल्प दिनुपर्छ अन्यथा महङ्गिले जनजिवन नै प्रभावित हुन्छ ।
Previous articleदाँतको समस्याहरुबाट कसरी जोगिने: डा. नियुक्ति अर्जेल
Next articleEngland into Euros final after ending Danish dream run